'ရှက်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း' ဆိုတဲ့စကားစုကိုငါနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းရင်းများ - နှုန်းထားများ
ငါ 'အရှက်ကွဲခြင်းလမ်းလျှောက်' ဟူသောစကားစုကိုငါနှစ်သက်သောအကြောင်းရင်းများ
'အရှက်ကွဲခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း' ဟူသောစကားစုသည်မိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသောမဖြစ်နိုင်သည့်စံနှုန်းများကိုဖော်ပြသည်။ မြင့်မားသောငါးများနှင့်အခြားအရာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံယူပြီးနောက်မနက်ခင်းတွင်သူ၏အိပ်ဆောင်သို့ပြန်လာသည့်လူအကြောင်းကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမကြားဖူးပါ ဟုတ်ပြီ ။
သို့သော်အဘယ်အရာကို 'အရှက်ကွဲ၏လမ်းလျှောက်' 'ထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်ပတ်သက်။ အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကနောက်ကွယ်မှတရားသဖြင့်စီရင်၏အလွှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ပန်းအားဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းစကားစုသည်အမျိုးသမီး၏ရှုပ်ထွေးသောဆံပင်သို့မဟုတ်မျက်ခုံးအမဲလိုက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်စကားလုံးများဖြစ်သည်ဟုအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းလက်တွေ့တွင်၎င်းသည်ထိုးနှက်ချက်ခြင်းနှင့် ပို၍ တူသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်ခုံးနှင့်မပတ်သက်ပါ။
'အရှက်ကွဲခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း' ဟူသောစကားစုကိုထောက်ပြ။ ထိုအချက်ကိုဝေဖန်ရန်အသုံးပြုသည် ဘုရားရေ! မနေ့ညကလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံ။ မိန်းမတစ်ယောက်သည် ၀ င်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ !! ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ ငါတို့သည်ဤအပြင်ဆင်ရန်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?!
အိုးငါသိ၏ ဒါကို 'အရှက်ကွဲခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း' လို့ခေါ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာငါဟာအမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစကားပြော၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်၊ ဟားဟား၊ ငါကျား၊
ဤတွင်သင်ရော်ဘင် Thicke ကိုကြည့်ပါတယ်
ထိုထက်မကပါ! ငါတောင်မှနှင့်အတူသူမ၏ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ် အရှက်ကွဲကိရိယာအစုံ၏လမ်းလျှောက် ၁) သူမအိမ်သို့လမ်းလျှောက်ရာတွင်လွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်လိင်မှပျော်မွေ့ရန်မိမိကိုယ်ကိုရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိစေရ။ ၂) သူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုရှက်ရွံ့စရာမလိုပါ၊ နံနက်ယံ၌မိတ်ကပ်နှင့် unbrushed သွား smudged သူအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဆက်စပ်။ ကျွန်တော့်သွားတွေကအမြဲတောက်ပနေတယ်။ အထီးအုပ်စိုး!
ဒီတော့မှန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော၊ ရှည်သောဆံပင်၊ ရည်းစားကိုးကွယ်သောနတ်ဘုရားမဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်အရှုံးသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ အတူတူယူယောက်ျားတစ်ယောက်ရ။
ဒါပေမယ့်ဒုတိယတစ်ခုကမင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့မင်းရဲ့နှစ်သက်မှုနဲ့ငါ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမင်းကိုထောက်ပံ့ဖို့ငါလိုအပ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါအသက်ရှင်နေတုန်းနဲ့ကျန်နေသေးတဲ့တစ်သက်တာလုံးအိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေတုန်းငါဟာ ရှက်စရာကောင်းတယ် ငါက ကွမ်းခြံကုန်း။ ထိုအခါငါဖြစ်၏ ရည်းစားရည်းစားမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတယ် ငါမှတ်စုများယူပါတယ်။ ရောနှောထားသောမက်ဆေ့ခ်ျလုံးဝမရှိပါ။
ရပ်။ နင်။ အရှက်ကွဲခြင်း။ တကယ်တော့, ကမ္ဘာ့ slut ကိုအသုံးပြု။ ရပ်တန့်။ ငါစကားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်သူတစ် ဦး တည်းပါပဲ။ ငါအလိုရှိလျှင်၎င်း၊
Ladies, ငါတို့ Lily Allen ရဲ့အယ်လ်ဘမ်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်။ အချင်းလူတို့၊ သင်ကြားနာရမည့်အချိန်ကာလမှာ -
ငါပြောမယ်ဆိုရင်မင်းကငါ့ရဲ့လိင်ဘဝပဲလို့မင်းကိုပြောတာပဲ။ ယောက်ျားလေးများကသူတို့ခွေးအကြောင်းပြောနေကြသောအခါ, ဘယ်သူမှပျော့သွားတာကိုရဲ့။ ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဖန်ခွက်မျက်နှာကျက်ရှိပါတယ်။ လုပ်ဖို့ငွေရှိတယ်။ ယခုမှာငါသည်ဤအရှိန်အဟုန်မှာမရွှေ့နိုင်အကြောင်းမရှိ '' ကြောင့်အရှိန်မြှင့်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ကိုစာရွက်တွေမှာမယုံနိုင်စရာဖြစ်မယ်လို့မမျှော်လင့်နိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တ ၀ ါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီ 'လမ်းများပေါ်တွင်အမျိုးသမီး, အစာရွက်များထဲမှာမထင်မှတ်' 'ကင်လုပ်ခိုင်းမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ငါတို့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်။ မရနိုင်ပါ (သို့) သင်နှင့်သင်၏ပုံရိပ်သည်ဤအချိန်နှင့်အချိန်တွင်အဆင်မပြေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်ကော? မိမိကိုယ်ကိုမည်သို့တင်ပြလိုကြောင်းကောမည်သို့နည်း။ ဒါဟာသင်ငါ့ကို '' အို '' လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ပတ်သက်။ မလုံခြုံနေငါ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အိုး, ငါထပ်မံအသံကျယ်ပြောသလား တောင်းပန်ပါတယ်
ဒါနဲ့ငါ့သူကပြောတယ်အောင်ပွဲရင်ခွင်ယူသွားတယ်, ငါကပျော်မွေ့သွားတယ်။ ငါမင်းတို့သိခဲ့ကြတာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာအနည်းဆုံးတစ်ခုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်။